Rakibolam-pirenena Aostraliana Nohavaozina Mampianatra Anao Ny Anglisy Aostraliana ‘Dinkum’ · Global Voices teny Malagasy
Rakibolam-pirenena Aostraliana Nohavaozina Mampianatra Anao Ny Anglisy Aostraliana ‘Dinkum’
Voadika ny 11 Oktobra 2016 5:37 GMT
Rakibolam-pirenena Aostraliana Andiany Faha-2. Sary avy amin'ny mpanoratra
Fony aho mbola mpampianatra, nisy mpianatra iray tsy mahazatra nanatona ahy tao an-tokontanin-tsekoly nandritra ny fakan-drivotra maraina. “Marina ve fa mamaky rakibolana ho toy ny fialam-boly ianao?” hoy izy nanontany. Ny setriny tamin'ny valinteniko nanaiky dia, “Olona marary ianao!” Efa niteny aho izay.
Nandritra ny taona maro, nanontany tena momba ireo teny sasany tamin'ny lahatsoratra navoakako ireo tonian-dahatsoratra sy mpandika teny tato amin'ny Global Voices. Ho an'ireo mitolona mafy na liana fotsiny amin'ny ‘Aostralianisma’, mety ho fotoana hanampiana ny fitehirizam-bokinao ny Rakibolam-pirenena Aostraliana nohavaozina.
Ny ankamaroan'ny olona miteny anglisy, Anglisy Aostraliana, fantatra koa amin'ny hoe Strine, dia tsy maintsy jerena tahaka ny teny vahiny. Jereo ny fehezan-teny eto ambany:
Na iza na iza mahatoky, mahafantatra ireo mpitolona ny dinkum Aostraliana avy Avaratr'i Astraya fa tena Meksikana ny Canberrana
Izay tena Aostraliana avy ao Avaratr'i Queensland dia mahafantatra fa ireo mponina ao Canberra, renivohi-pirenena, dia avy ao atsimon'ny sisintany (ary izay no maha-ambany azy) .
Hita betsaka amin'ny voambolana Anglisy Aostraliana (samy ahitana hevitra manambany ny fanondroana ara-jeografika roa ao amin'ny fehezan-teny etsy ambony) ny fifandrafiana eo amin'ny samy fanjakana na samy faritra. Ohatra, mirehareha amin'ny anjara birik'izy ireo ao amin'ny Rakibolam-pirenena Aostraliana ny Taswegians, izay avy any amin'ny nosy atsimon'ny fanjakan'i Tasmania, ary tahaka izany, mety anasokajiana azy ireo ho “yaffler (be resaka) na bevava izany fieboebon-dry zareo izany:
Mahita ny ambin'i Aostralia ho “avy amin'ny tanibe” ny Taswegians:
Sehatry ny fizahan-tany “hanavotana ny ao amin'ny tanibe” – ABC News
Mifandraika amin'ny renivohitr'i Aostralia, Canberra, ny fanampiny roa vaovao ao amin'ny rakibolana: Ny ‘Canberran’ dia olona avy any Canberra, ary ny ‘Canberra bashing’ dia karazan-javatra toa fandanian'andro ara-politika ao amin'ny firenena. Nanana hafatra ho an'ireo olombitsy an-tserasera ny lehiben'ny minisitra ao an-toerana mba handamina ireo mpanitsy ny tsipelin’ izy ireo:
Tafiditra tao anaty rakibolana ihany izany ny ‘Canberran’ saingy fotoana izao hidiran'izany ao amin'ny #Microsoft #Apple #Twitter ihany koa
Nanampy tamin'ny fanatontosana ny andiany faharoa ny rakibolana i Andrew Leigh, mpanao politika hafa avy ao Canberra, mpikambana ao amin'ny Antenimiera, 28 taona taorian'ny andiany faharoa. Tao amin'ny fanamarihana nataony no nanasongadinany ireo fehezanteny sasantsasany tafiditra tao amin'ny famoahana:
‘callithumpian’ (tsy fisian'ny firaiketana na amin'ny fivavahana na inona na inona)
‘rurosexual’ (tovolahy tia lamaody monina any ambanivohitra)
‘sea changer’ (fiovan'ny fomba fiainana, indrindra ny miala an-tanàna mifindra mankany an-tanàna amoron-dranomasina)
‘doesn't know whether he's Arthur or Martha’ (ao anatin'ny toe-javatra misafotofoto)
‘your blood's worth bottling’ (manana lanja miavaka ianao)
‘do a Bradbury’ (lasa mpandresy tsy ampoizina)
‘carry on like a pork chop’ ( mitondra tena amim-pahadalana, manao hadalana)
‘happy as a bastard on father’s day’ (tena tsy faly mihitsy)
‘straight to the pool room’ (maneho ny fahalebiazan'ny lanjan'ny fanomezana na loka, sns)
‘wouldn't know if a tram was up him unless the conductor rang the bell’ (tena adala tanteraka)
Niresaka momba ireo teny indizeny sasany miseho ankehitriny ihany koa izy, tahaka ny “gubinge”, izay karazana paiso, sy ny “migaloo”, midika hoe olona fotsy.
‘Migaloo’ no hany tokana ao amin'ireo teny 500 mahery avy amin'ny fiteny vazimba teratany sy ny fitenin'ny nosy Torres miisa 100 , araka ny nazavain'ilay tonian-dahatsoratry ny Rakibolam-pirenena Aostraliana tao amin'ny tranonkalam-baovao sy fanadihadiana The Conversation tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Mahafantatra Bunji avy amin'ny Boorie ve ianao? Fantaro ny teny indizeny vaovao ao amin'ny rakibolantsika’.
Na dia naseho ho toy ny “vaovao” aza ireo teny nampidirina ireo, dia maro amin'ireo no vaovao amin'ilay rakibolana ihany. Nandritra ny taompolo 1960 ohatra, nilaza ny raiko fa efa hoe «callithumpian» hatrany rehefa milaza ny fivavahany ao anatin'ny taratasy Fanisam-bahoaka [mg].
Toa mifantoka be loatra amin'ny fanintsanana ny Oz (Aostraliana) iray be mpankafy ny tontolon'ny Twitter ‘OS’ (ampitan-dranomasina):
“Marina izany. Aostralia no toeran'ny olona tsy ampy saina”
Marobe ireo ompa. Ny mahazatra ahy dia ny ‘dropkick’ (teny ara-panatanjahan-tena mitovy rima amin'ny ‘prick’ (manindrona) sady ampiasaina amin'izay dikany izay) sy ny ‘dickhead’ (bandy adala). Ankoatra ny “bogan” (olona tsy manana kolontsaina sy tsy sarotiny) ankafizin'ny haino aman-jery, misy ny karazantan-teny ho an'ny olona manana teny mety manafangaro zavatra, toy ny ‘dag’ (mahay loatra), ‘hoon’ (sanana) ary ny ‘tall poppy ‘(olona malaza na mahomby). Sary mahafinaritra ny ‘stunned mullet’ (fitenin'ny mamo).
Ny praiminisitra vao haingana no nifantohan'ny sasany tamin'ireo fiteny vokatry ny tany ao an-toerana. Nahavitra ity lohatenin-tantara an-tsary tsy hay hadinoina ity i Julia Gillard : Head ranga (mena volo) ao amin'ny sanger [sandwich] clanger! (tsy afaka mitaky ‘clanger’ ny Aostraliana. Britanika fiaviana, izay midika hoe fahadisoana bevava na fanamarihana mahamenatra).
Nahazo mpihaino iraisam-pirenena i Tony Abbott mpandimby azy amin'ny teny ara-panatanjahantena hoe ‘shirtfront‘ (Fitsipika Aostraliana amin'ny baolina kitra noho ny fanasaziana mpifanandrina amin'ny fomba tsy ara-dalàna) sy ny ‘budgie smugglers’ (kilaoty filomanosana mifinjifinjy).
Na dia ny New York Times aza dia voasarika tamin'ity andiam-boky mavesa-danja ity. Milanja 4,54 kilao (10 lbs) sy ahitana pejy 1.864 pejy ny boky roa amin'ny Rakibolam-pirenena Aostraliana. 16.000 ankehitriny ny isan'ireo teny iditra.
Nanampy teny malaza 6.000 ny rakibolana Aostraliana. Tsapao ny fahaizanao.
Fandraisana anjara iray hafa amin'ny fanatanjahan-tena ny ‘falcon’ (voromahery) (baolina midona tsinahy amin'ny loha). Misy ifandraisana amin'ny mpilalao ligy baolina lavalava iray amin'ny tontolo avy any Malte ny teny sy ny fiaviany.
Nahazo aingam-panahy tamin'ny afisy “fizza” ny Praiminisitra ankehitriny Malcolm Turnbull nandritra ny fifidianana farany, safidy hafa amin'ny ‘fizzer’ (tsipoapoaka tsy nety nipoaka). Tafiditra ao anatin'ny ‘Canberra bashing’ ny Cutting down tall poppies (hazo avo halan-drivotra atao amin'ny olo-malaza na mpanao politika).
Lohahevitra miverimberina ny teny fampifandraisana amin'ny biby, indrindra ny zoomorphisms (milaza bika, toetra na zavatra mampiavaka biby atondro olombelona):
Donkey-voters and dead dingo’s donger: [mifidy izay anarana mipetraka voalohany sy matin'ny hetaheta] voatra vaovao ao amin'ny Rakibolam-pirenena Aostraliana
Amin'ireo teny nampidirina vaovao, ny “dingo” dia midika olona mampiseho fahakanosana sy famadihana. Ny ‘two dog night» dia refy milaza ny hatsiakan'ny andro. Mampiseho ny fitiavan'ny Aostraliana mivazivazy ny rakibolana, izay matetika toy ny ‘dry as a dead dingo’s donger’ (filahian'ny alika dia). Tsy tokony afangaro amin'ny teny mitovy fanononana aminy ‘Donga’ (fialofana vonjimaika).
Iditra rakibolana “As dry as a dead dingo's donger”. Sarin'ny mpanoratra
Iray amin'ireo Aostralianisma ankafiziko ny ‘tsy ho faty noho ny “quid” [tsinontsinona] ianao”. Ny quid dia tenin-jatovon'ny pound (£ na livra) talohan'ny vola desimaly. Midika mitovitovy amin'ny hoe, ‘tsy tsara ve ny fiainana! tsy maintsy ho tratrako izany na ahoana na ahoana’.
Teny farany sasany avy amin'i Martha Cooper, mpitati-baovao ao amin'ny tranonkalam-baovao Amerikana Quartz sy mpikambana ela nihetezana tato amin'ny Global Voices:
Nampitahainay ny teny vaovao tao amin'ny rakibolana Aostraliana sy Oxford, ary ankehitriny tsy fantantray raha Arthur na Martha izahay
Ampahany manan-danja amin'ny trano famakiam-boky “dinkum” na efitrano fanovozam-[pahaizana] ny Rakibolam-pirenena Aostraliana. Fanampiny ireo fomba fiteny 123.000 (miavaka amin'ny fahatsarany). Azo jerena antserasera ny andiany voalohany. Antenaina fa ho avy tsy hoe ela ny andiany faharoa.